25 Casharro si loo hagaajiyo sawirrada leh CSS iyo jQuery | Abuurista khadka tooska ah
25 Casharro si loo hagaajiyo sawirrada leh CSS iyo jQuery
Boodka ka dib waxaa jira farsamooyin badan oo lagu hagaajinayo sawirrada, dhammaantoodna waxaa lagu sameeyay jQuery oo ah saldhigga ugu weyn ama CSS3 anagoo ka faa'iideysaneyna heerarka ugu dambeeya ee webka, in kastoo aan idin xusuusinayo inay taasi dhacdo waxaan lumineynaa iswaafaqsanaanta biraawsarayaasha qaarkood.
Waxay ku qoran yihiin Ingiriis laakiin waxaa lagu qabtay duulimaad, waa loo ballanqaaday :)
Xigasho | 1aadWD
1 CSS3 Sawir Wareegsan JQuery
3 Astaamo iyo Xuduudo badan oo leh CSS 2.1
5 Talo Degdeg ah: Xudduud badan oo leh CSS fudud
7 Xudduud Badan oo ku Saabasan Waxyaabaha Isbedelaya oo leh CSS2
9 Ku Baashaal w / Xuduudaha - Beledled, Pressed, & More!
11 Polaroids leh CSS3
13 Muuqaalka Asalka ee Bogga oo Buuxda
15 CSS3 Box Hooska iyo Saamaynta Sawirka
17 Fannaanka Thumbnail Hover Effect w / jQuery
19 Sida Loo Abuuro Saameynta Sawirka Sawirka CSS ee Fudud
23 Saamaynta Snazzy Hover Isticmaalka CSS
25 Isbarasho Degdeg Ah La'aan
26 Horey usoco
28 jQuery geesaha wareega
30 Qalabaynta ugu fudud iyo Horudhaca Sawirka Isticmaalka jQuery
32 La beddelay - Shaashad buuxda oo Taariikh ah /
34 Plugin jQuery
36 PNG Dusha sare
39 Miisaan culus
41 Fogee Plugin
43 U adeegsiga jQuery Sawirada Sawirka Sawirka
45 5 Siyaabood oo Loogu Shubo Sawiradaada CSS
47 Sida loo:
48 Waa la bedeli karaa
49 Muuqaalka Muuqaalka
51 Qaabee Xiriiriyaha Sawirkaaga
53 Masawirro Asal ah oo badan oo leh CSS
55 Xuduudaha Sawirka ee CSS
57 CSS Sprites iyadoon la adeegsan Sawirada Taariikhda
CSS3 Sawir Wareegsan JQuery
Baro inaad ku duubtid taako taako ah qaybta sawirka si aad u gaarto sawirro wareegsan oo si sax ah loogu soo bandhigi doono dhammaan daalacayaasha casriga ah.
Astaamo iyo Xuduudo badan oo leh CSS 2.1
Baro sida loo isticmaalo CSS 2.1 been-abuurka si loo bixiyo ilaa 3 shiraac oo sooyaal ah, 2 sawirro soo-jeedin cabbir go'an ah, iyo xuduudo badan oo adag oo loogu talagalay hal cunsur HTML ah.
Talo Degdeg ah: Xudduud badan oo leh CSS fudud
Shaashad dhakhso leh oo ku tusaysa sida loo gaaro xuduudo badan oo leh CSS fudud habkaas oo lagu darayo qoto dheer naqshadahaaga. Nooc fudud oo fudud oo casharkii hore ah.
Xudduud Badan oo ku Saabasan Waxyaabaha Isbedelaya oo leh CSS2
Nooca saddexaad ee Nicholas Gallagher ku tusinaya waxaad samaynayso haddii aadan cabbirka cabbirka.
Ku Baashaal w / Xuduudaha - Beledled, Pressed, & More!
Baro sida loogu gaaro saameynta cadaadiska leh CSS iyo tabaha fudud ee xuduudaha si aad uhesho saameyn kala duwan.
Polaroids leh CSS3
Baro sida loo isticmaalo qaar ka mid ah CSS2 iyo CSS3 oo laga cabsado si loogu beddelo liistada haddii kale liidata ee sawirada oo aad u buuxiso sawirro Polaroid ah.
Muuqaalka Asalka ee Bogga oo Buuxda
Baro sida loogu daro sawirka asalka leh CSS kaas oo ku buuxiya bogga oo dhan sawir, ma laha meel cad, sawirka miisaanka sida loogu baahan yahay, ma sababo baararka wareega iyo waxyaabo kaloo badan.
CSS3 Box Hooska iyo Saamaynta Sawirka
Baadh hab cusub oo aad ku darto saamaynta hooska hoos u dhaca adoo hagaajinaya xaashida qaabka.
Fannaanka Thumbnail Hover Effect w / jQuery
Ku guuleysato waxqabadka qaab-dhismeedka toosan leh CSS iyo jQuery.
Sida Loo Abuuro Saameynta Sawirka Sawirka CSS ee Fudud
Casharradan waxaad ku baran doontaa sida loo abuuro saamayn rog rogaan muuqaal CSS fudud ah HTML aasaasiga ah iyo qaabeynta CSS.
Fallaadhinta ayaa kaa qaadeysa aasaaska waxyaabaha sabeynaya sida sawirrada, koofiyadaha hoos loo rido, badhamada soo socda iyo kuwa dambe, qolalka sawirada, liisaska liistada iyo qaababka safafka badan. Fiiri 4 casharro loo qoondeeyay sawir sabayn ah.
Saamaynta Snazzy Hover Isticmaalka CSS
Casharradan, waxaad ku dul wareegi doontaa abuurista farsamooyin hover sare oo dabacsan adoo adeegsanaya guryaha CSS2.1.
Isbarasho Degdeg Ah La'aan
Markaad isticmaaleyso rogaal celinta sawirka CSS, labo, seddex, ama in kabadan sawiro waa in laxiraa (badanaaba waa ladiidayaa natiijooyinka ugu wanaagsan). Baro sida loo wada dhigo dhamaan gobolada hal sawir wuxuu sameeyaa isbedelo dhaqsaha badan isla markaana uma baahna wax horay u sii dejin ah.
jQuery geesaha wareega
Dhibaatooyin badan oo jQuery ah oo loogu talagalay geesaha wareegsan iyo qaabab badan.
Qalabaynta ugu fudud iyo Horudhaca Sawirka Isticmaalka jQuery
Eeg 3 tusaale oo ah isticmaalka qoraalka horudhaca ah ee jQuery rollover. Qoraalkan fudud waxaa loo adeegsan karaa ujeedooyin kala duwan.
La beddelay - Shaashad buuxda oo Taariikh ah /
Superzided waa shey jQuery ah oo cabirkiisu yahay cabirka sawirada si loo buuxiyo biraawsarka iyadoo la ilaalinayo cabirka cabirka muuqaalka iyo wareegyada Sawirada / sooyaalka iyada oo loo marayo slideshow leh kala guur iyo soo dejin.
PNG Dusha sare
Weligaa ma kula soo kulantay dhibaatada abuurista goob sawirro uu macmiilku siiyay, oo aad mar dambe ka heli karto ka dib markay cusbooneysiiyaan sawirradooda muuqaalka asalka ah iyo dareenka aan la hayn? Xalkani wuxuu ku lug leeyahay abuurista PNG daahfuran oo hufan oo loo isticmaali karo sida maaskaro / qaab ku wareegsan JPEG ama GIF caadiga ah. Qaabkan, rakibaadda CMS ee caadiga ah waa la qaabeyn karaa si dadka isticmaala ay u soo rogi karaan sawirro iyaga oo aan ka walwalin adeegsiga barnaamij kasta oo muuqaallo ah si ay u adeegsadaan miirayaasha.
BeZoom waa beddel fudud oo fudud JQZoom. Way fududahay oo way fududahay in la isticmaalo.
U adeegsiga jQuery Sawirada Sawirka Sawirka
Ku ciyaar jQuery oo beddel booska sawirka asalka si aad u abuurto nooca saameynta aad raadineyso. Waxaa jira maqaal cusub oo ka jawaabaya "Sideen ula tacaalaa gobollada firfircoon?" - U Maareynta Gobolka Firfircoon ee Aasaaska Animated jQuery.
5 Siyaabood oo Loogu Shubo Sawiradaada CSS
Waa kuwan xeelado fudud oo fudud si loogu daro dhadhan qaar ka mid ah sawirradaada caadiga ah. Isticmaalka Photoshop si aad u qaabeysid sawir kasta wuxuu noqon karaa mid caajis badan oo adag in la ilaaliyo muddada dheer. Farsamooyinkaan soo socda ee CSS ayaa kaa caawin doona inaad xanuunkaas iska yareyso.
Waa la bedeli karaa
Baro sida loogu sameeyo sawir asal ahaan bed bedeli kara CSS. Waxaad haysataa 3 xulasho oo aad kala dooran karto.
Qaabee Xiriiriyaha Sawirkaaga
U oggolow dadka isticmaala inay ogaadaan in qaybta gaarka ah ee boggayaga internetka loola jeedo in la riixo ayaa ugu wanaagsan ee lagu gaaro jiirka waxtarka badan. Qaybahaas "la riixi karo" hubaal waxaa ku jira sawirro muuqaal ah. Xiriirinta Sawirka waa qoraal awood kuu siinaya inaad ku dabaqdo qaabeyn dheeri ah iskuxirkaaga sawirka.
Masawirro Asal ah oo badan oo leh CSS
Waqtiyada qaarkood, waxay macno u leedahay isticmaalka sawirada asalka ah halkii si toos ah loogu dhejin lahaa bogga. Iyo in walboo kasta - sida sumadda jirkaaga - ay qaadi karto oo keliya hal muuqaal asal ah, waxaa lagu dabaqi karaa dhowr waxyaalood.
Xuduudaha Sawirka ee CSS
Runtii waa tababbar fudud oo ku tusaya sida loogu daro xadka adag sawirrada iyadoo la adeegsanayo CSS.
CSS Sprites iyadoon la adeegsan Sawirada Taariikhda
Baro sida loo dalbado saameynta dhaqdhaqaaqa iyada oo aan aqoon badan laga haynin CSS.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » 25 Casharro si loo hagaajiyo sawirrada leh CSS iyo jQuery
25 Naqshadood Oo Ku Waxyooday Dabeecadda